शिक्षा मन्त्रीको अडानविरुद्ध डा. केसी, अनसन बस्न १७ गते नकुर्ने चेतावनी - Everest Dainik - News from Nepal
शिक्षा मन्त्रीको अडानविरुद्ध डा. केसी, अनसन बस्न १७ गते नकुर्ने चेतावनी
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर पन्ध्र पटक अनसन बसिसकेका डाक्टर गोविन्द केसीले अब आफू पुन: त्यसो गर्न तत्कालै बाध्य हुन लागेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयले सीटीइभीटीलाई अलग राख्नुपर्ने धारणा राख्यो भने त्यसो गर्नु सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको विगतको सहमति विपरीत हुने अन्य सदस्यहरूले बताए।
डा केसीले भने सीटीइभीटीलाई छुट्याउन खोजे आफू कुनै पनि बेला अनसन बस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
याे पनि पढ्नुस नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्छ– पोखरेल
डा केसी फेरि असन्तुष्ट, कारण यस्ता छन्
के भयो छलफलमा?
आइतवार बसेको उपसमितिको बैठकमा अधिकांश विषयमा सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता अनुरूप नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन सहमति जुटेको बताइएको छ।
उनले भने, “डा केसीका अनुसार पाँच वर्ष भित्र सीटीइभीटीलाई बन्द गर्ने कुरा छ। तर विश्वविद्यालय भनेको माथिल्लो स्तर हो, अनमी जस्ता साना तालिमका कुरालाई समेट्ने सीटीइभीटीलाई छुट्याउने कि भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको कुरा छ।”
सरकार र डा केसीबीच भएको सहमति बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेको सीटीइभीटीलाई आयोगभित्र नै राख्नुपर्नेछ।
माथेमा प्रतिवेदनमा पनि सीटीइभीटीलाई पाँच वर्षभित्र बन्द गर्ने र आयोग अन्तर्गत ल्याइने उल्लेख छ।
डा केसीलाई लाग्यो आर्थिक चलखेलको आशंका
उनले भने, “चिकित्साको गुणस्तरीय शिक्षा हुनलाई डाक्टर मात्र भएर हुँदैन। नर्स, रेडियोग्राफर, ल्याव टेष्ट गर्नेहरू, अनमी जस्ता सबै पक्षको शिक्षा गुणस्तरीय हुनु पर्छ। त्यसनिम्ति सीटीइभीटी पनि आयोग भित्र हुनुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने म १७ गते कुर्दिन तुरुन्तै सत्याग्रह सुरु गर्छु।”
उपसमितिले सोमवार अन्तिम बैठक बोलाइ प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोमवार नै पूर्ण समितिमा पठाउने जनाएको छ।
समयमै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए पुस १७ गतेबाट फेरि अनसन थाल्ने डा केसीले बताइसकेका छन्।
ट्याग्स: Dr Govind kc, Educuation Minister, Girirajmani pokharel